Yoù Na-Akarata? Exzọ Mbata? Ka Ọ Bụ Nanị Ihe arịba Ama? | Martech Zone
Sọnde, Septemba 22, 2013 Sọnde, Septemba 22, 2013 Douglas Karr
The nghọta nke ihe online ahịa kwesịrị Ọ dị iche na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ndị ahịa nwere afọ ojuju na ịnwe saịtị broshuọ mara mma ka ha wee nwee ike lelee ndepụta ahịa ha na ha nwere saịtị mara mma. Ọ bụ echiche na-adịghị mma, mana ụfọdụ ka na-agbasi mbọ ike ịghọta ụdị mmekọrịta mmekọrịta nke weebụ ma ha nọgidere na-adabere na nnwale ha bụ eziokwu ọdịnala ahia azum. Ọ ga-amasị m ị tufuo ihe atụ nke m na-eche maka oge ụfọdụ - na-akpọghachite anyị na ozi atụghị nke ọma.
Usoro ahia ịntanetị gị nwere ike ịbụ iriba-ama, ihe Ụzọ ọpụpụ ma ọ bụ a ebe maka atụmanya na ndị ahịa. Atụmatụ ọ bụla nwere ụgwọ na uru ya. Ihe ịrịba ama a chọrọ obere ego ma nye obere nzaghachi. Ọpụpụ chọrọ ihe. Ebe njedebe dị ọtụtụ. Kedụ ka ị ga - esi kpebie ihe ị ga - eme?
Iji nye agba na ihe atụ a, ka anyị kwuo na m ga-azụ ma wụnye Philips 55 ″ HDTV. Ya mere, ana m eme nyocha banyere ngwaahịa na ozi iji zụta ezigbo ahịa, ma mụta otu esi edozi ya ma rụọ ya.
Philips: Ihe ịrịba ama ahụ
Weebụsaịtị Philips bụ a Sign. Zere ịnye ọnụahịa ma ọ bụ ozi ọ bụla gbasara ebe ịzụta, ngwa ndị ị ga-eji, ma ọ bụ vidiyo na otu esi eji ngwaahịa a - weebụsaịtị a bụ naanị broshuọ dijitalụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ mara mma nke ukwuu, enweghị ọrụ ọ bụla. N'ezie, naanị mmadụ 4 enyochale ngwaahịa ahụ… na ụfọdụ nyocha na-adịghị mma. The peeji n'ezie agbajikwa, kwa… na-ekwu na e nwere 0 reviews mgbe e nwere n'ezie 4.
Newegg: Exzọ ọpụpụ
Na mgbakwunye na nkọwapụta teknụzụ ị hụrụ na Philips, Newegg na-enye ohere ịzụta, lee ngwaahịa ndị yiri ya, wee hụ nyocha (ọ bụ ezie na ọ nweghị nke ọ bụla). Ọ bụrụ na ọnụahịa Newegg, usoro mbupu na nloghachi dị mma - ọ bụ ebe a ka ịpụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịlaghachi n'okporo ụzọ wee chọọ ebe ọzọ ịchọta ozi ahụ ma ọ bụ zụta ya.
CNET: Ebe njedebe
Otu anya na nsonaazụ ọchụchọ ị nwere ike ịkọ nke ụlọ ọrụ etinyelakwu na njikarịcha njin ọchụchọ ha. Ntinye nke CNET nwere snippets bara ụba maka nyocha na ịnye ọnụahịa, yana enyere ike ide akwụkwọ:
Akwụkwọ nyocha dị omimi ma dịkwa egwu incredible site na nyocha CNET, nyocha onye ọrụ, nkọwa onye ọrụ, ike ịgbaso mgbanwe na ibe, vidiyo, ntuziaka maka ojiji, mmekọrịta mmekọrịta miri emi (yana ọtụtụ mmekọrịta), ọtụtụ onyonyo gụnyere sistemụ menu, ọtụtụ nhọrọ ebe ịzụta, ọnụahịa ugbu a, nkọwapụta nke nyocha ahụ, iji atụnyere ụdị ndị ọzọ, nkọwapụta teknụzụ (gafee saịtị Philips!) Na mgbakwunye na nyocha zuru ezu nke onye edemede aha ya nwere foto na akụkọ ndụ .
Ọ bụ ezie na ịnweghị ike ịzụta na CNET, nke a bụ saịtị ebe a. Ndị mmadụ nwere ike isi na saịtị a pịa bọtịnụ ịzụta na Amazon ma ọ bụ ebe ọzọ, mana nke a bụ ebe ha chọtara ozi ha chọrọ na ebe ha ga-alaghachi oge ọzọ.
Zụrụ Kasị Mma: Fail
Best Buy anaghị eche ma ị zụrụ ngwaahịa ma ọ bụ na not ha bụ naanị mgbe ahịa ọhụrụ. Ya mere - chefuo eziokwu ahụ m nwere Kaadị Buygwọ Bestgwọ Kachasị Mma nakwa na enwere m ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ịzụta m mere n'ụlọ ahịa gị. Onweghi ofe gi.
Philips nwere ike iwulite peeji dị ịtụnanya - site na vidiyo, ntuziaka, ngwa, yana nyocha onwe onye nke ndị isi ụlọ ọrụ. Ma ọ bụ ha nwere ike idozi saịtị ndị ọzọ na nyocha na ibe. Ikekwe ihe na-adọrọ adọrọ kachasị na-efu bụ ikike naanị ịhụ ọnụahịa wee pịa ịzụta na ntanetị nke na-ebu ngwaahịa ahụ.
Ọ bụrụ na CNET nwere ike ịba uru site na ịdabere na mgbasa ozi na mgbakwunye mmekọ, n'ezie saịtị ndị dị n'elu nwere ike ịkwalite ibe ha iji nweta atụmatụ na ọdịnaya niile dị mkpa iji bụrụ saịtị na-aga.
Kedụ ka ị ga - esi wughachi saịtị gị iji hụ na ọ bụ ebe ndị ọbịa na - eme nyocha ma ọ bụ na - azụ ahịa na ụlọ ọrụ gị? Echere m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ele onwe ha anya dị ka ụzọ ọpụpụ na ha na-ele anya dakọtara ma ọ bụ merie asọmpi ha site na ịbụ a mma Ụzọ ọpụpụ. Gịnị ma ị gaghị abụ ebe ahụ?